I-Multimedia All-in-One whiteboard FC-8000 ibhodi elihlakaniphile elididiyelwe, elihlanganisa nebhodi elisebenzisanayo, ikhompuyutha ye-OPS, izipikha, isibonisi, isilawuli esimaphakathi esihlakaniphile, isilawuli-in-one sokukodwa esine-mic nethreyi yepeni kudivayisi eyodwa ehlakaniphile. Isebenza nanoma yiluphi uhlobo lweprojektha, idumile futhi isetshenziswa kabanzi kumakilasi e-multimedia, amagumbi okuqeqesha kanye nama-boardrooms enkomfa.
I-EIBOARD Multimedia All-in-One whiteboard 82inch, njengemodeli ye-FC-8000, ihlanganisa zonke izinto ezidingekayo zokufundisa uthisha azidingayo ekilasini, ezihlanganisa nebhodi elihlakaniphile elingu-82”, ikhompuyutha ye-OPS, isilawuli esimaphakathi, izipikha, imakrofoni engenantambo. kanye nesilawuli kude se-in-one kudivayisi eyodwa ehlakaniphile. Kwenza ukufundisa kube lula futhi kuphumelele kakhudlwana.
* I-EIBOARD Multimedia All-in-One whiteboard 82inch ihlanganiswe kakhulu ne-in-one design.
* Isebenzisa umklamo ohlanganisiwe wokuhlanganisa okungenamthungo ukuze ube muhle kakhulu futhi ube lula.
* Ngokufaka nokusebenza okulula.
* Ngokukhwezwa kodonga nokuklanywe konke-konke, kunikeza uthisha isikhala esengeziwe sokuzulazula ukuze kube lula ukufundisa.
* Ibhodi ine-infrared 20-point touch, engahlangabezana nokubhala ngesikhathi esisodwa kwesidingo sabantu abaningi.
* Ilwa nokushayisana kanye nokulwa nokuklwebheka okusekelwe ezintweni zebhodi zobuchwepheshe obugoqekayo.
* Ukwenza ngokwezifiso osayizi abaningi kuyamukelwa ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zezimo zokufundisa ezahlukahlukene.
Iphakeme kunamabhodi asebenzayo avamile, i-EIBOARD all-in-one interactive whiteboard FC-80000 ihlanganisa wonke amathuluzi okufundisa adingwa uthisha ekilasini, ahlanganiswe nebhodi elihlakaniphile elisebenzisanayo, ikhompuyutha ye-OPS, isilawuli esimaphakathi, izipikha, imakrofoni engenantambo. kanye nesilawuli kude se-in-one kudivayisi eyodwa ehlakaniphile.
I-EIBOARD all-in-one interactive whiteboard yenza ukufundisa kuphumelele futhi kube lula.
1. Ukuhlanganisa Kakhulu kanye Nezindleko Zokonga
Kuhlanganiswe zonke izisetshenziswa zokufundisa ezidingekayo kudivayisi engu-1, okuhlanganisa ibhodi elihlakaniphile elisebenzisanayo, ikhompuyutha ye-OPS, isilawuli esimaphakathi, izipikha, imakrofoni engenantambo nesilawuli kude sakho konke.
Idizayini esebenziseka kalula ithuthukisa imiphumela yokufunda futhi yenza ukonga izindleko ngokuqhathaniswa.
2. Ukuqala Ngokushesha kanye Nokuvala shaqa
Ukhiye owodwa wokuqala noma wokuvala isistimu ephelele, okufaka ibhodi elimhlophe lezinto zonke kanye neprojektha exhunyiwe, okulula kothisha ukuthi bayisebenzise futhi bonge isikhathi.
3. Multi-touch futhi Dry-erase Board Surface
Ngokuthinta kwamaphoyinti angama-20, isekela abasebenzisi abaningi ukuthi basebenze ngasikhathi sinye.
Ngobuso obuqinile be-Polyvision e3 ceramic, isekela umaka weyinki ukubhala nokusula kalula.
4. Usayizi Webhodi Lokwenza ngokwezifiso
Osayizi abatholakala ngokwejwayelekile ngu-82 inch, 96inch no-140 inch. Amanye amasayizi angenziwa ngokwezifiso ngokusho kwamabhodi adingekayo.
Izici Eziyinhloko ze-EIBOARD Multimedia All-in-one Whiteboard
②Ibhodi Lokubhala Elihlakaniphile
④Ikhompuyutha eyakhelwe ngaphakathi
⑦ Ukulawula okumaphakathi
Okwedlule: I-Multimedia All-in-one FC-7000
Olandelayo: Ibhodi elimhlophe elisebenzisanayo
Igama Lomkhiqizo I-Multimedia all-in-one Whiteboard
Sisakhiwo Imodeli FC-8000
Ibhodi Esebenzisanayo Umbala Isiliva
Okubalulekile I-Aluminium Alloy Frame
Ubuchwepheshe Ubuchwepheshe be-infrared
Iphoyinti lokuthinta 20 amaphuzu touch
Isikhathi sokuphendula ≤8ms
I-PC eyakhelwe ngaphakathi Ibhodi lomama I-Industrial Grade H81 (H110 ngokuzikhethela)
CPU I-Intel I3 (ongakukhetha i-i5/i7)
RAM I-4GB (ngokuzikhethela okungu-8g)
I-WiFi Kufakwe 802.11b/g/n
OS Faka kuqala i-Win 10 Pro
Somlomo Okukhiphayo 2*15Watt
I-Smart Central Controller Iphaneli yesilawuli 8 Okhiye inkinobho yokuthinta
Ukuqala okusheshayo Inkinobho eyodwa ukuvula/ukuvala i-PC kanye neprojektha
Ukuvikelwa kweprojektha Idivayisi yokubambezeleka kokucisha amandla eprojektha
Isibonisi Ikhamera yedokhumenti I-CMOS
Skena usayizi A4
Amandla Ukusetshenziswa kokokufaka 100~240VAC,190W
Itheku I-USB2.0*8,USB3.0*2,VGA ku*1,Umsindo ku*2,RJ45*1,irimothi ye-infrared ku*1,HDMI in*2,RS232*1,Audio out*2,HDMI out*2 ,Thinta i-USB*2,VGA out*1
2.4G+ Isilawuli kude Isikhombi se-Laser + igundane lomoya + isilawuli esikude + Imakrofoni engenantambo
Ingakwazi ukulawula ivolumu, ukuphenduka kwekhasi le-PPT;
Ingakwazi ukufinyelela ku-inthanethi ngokhiye owodwa;
Okokufundisa nokude nokwethulwa.
Izesekeli 2*amapeni,1*Pointer,2*Power cable, 1*RS 232 cable,QC nekhadi lewaranti
Iwaranti Unyaka owodwa
Isofthiwe I-Whiteboard software*1, i-Visualizer software*1, isofthiwe yesilawuli esimaphakathi*1
I-Hitachi Interactive Whiteboard
I-Interactive Board Price
I-Samsung Interactive Whiteboard